Xildhibaan Cabdi Cali oo dalbaday in Baarlamaanka la horkeeno qodobada kasoo baxa shirka Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdi Cali oo dalbaday in Baarlamaanka la horkeeno qodobada kasoo baxa shirka Muqdisho
September 14, 2020 Hassan Istiila
Madaxweyne Max’med Cabdullahi Farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa maalintii labaad shir ku leh Magaalada Mogadishu kaas oo looga hadlayo arrimo la xiriira doorashada Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa qaba in haddii Madaxweyne Farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay doonaan in waxka bedel ku sameeyaan sharcigii uu ansixiyay Golaha Shacabka ee doorashayooyinka dalka, looga baahan yahay inay Baarlamaanka horkeennaan.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay haddii sharcigii doorashooyinka ee Baarlamaanka uu ansixiyay ay isku raacaan in aan loo baahneyn in Baarlamaan lagu soo celiyo. Waxaa uu hadalkiisa sii raaciyay in Baarlamaanka oo keliya uu dalka u sameyn karo sharci lagu dhaqo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa bil ka hor sheegay in qodobada kasoo baxa shirka uu la leeyahay maamul-gobolleedyada uu dib ugu soo celin doono Baarlamaanka si ay go’aan uga gaaraan.
Xildhibaan Canab Xasan Cilmi oo sheegtay in Bajaajyada ay dhib ku hayaan magaalada iyagana ay dhib isku hayaan
Golaha Shacabka oo maanta ka dooday heshiiska arrimaha udhaxeeya Turkiya iyo Soomaaliya